♡ "I-Casa Giauni" e-Triora - I-Airbnb
♡ "I-Casa Giauni" e-Triora
Triora, Liguria, i-Italy
U-Valentine Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa kwenye yezindlu zomlando zedolobhana esohlwini lwase-Triora.
Enkabeni yedolobha elidala, le ndlu eyiqiniso yekhulu le-16 ibuyiselwe endaweni enokuthula ekhanyayo.
Uzojabulela indawo yayo ephansi, ifulethi elinamakamelo angu-3 elivuleka ezintabeni ezinhle ezenza umlingo wase-Argentina Valley.
Kuxutshwa ifenisha yakudala nemidwebo yamanje, okuhlanganisa okudalwe okuhlukile komdwebi waseMelika u-Judy Sale owayehlala e-Casa Giauni iminyaka embalwa, ifulethi elingu-62 m² liheha nge-aura yalo enokuthula.
Ngaphandle kwe-vis-à-vis, ikhanya kakhulu futhi ibheka emithambekeni enamahlathi yezintaba phambi komuzi.
Uzolala ethaleni elincane kuzwakale umsindo wamaphiko enkonjane ebhakuzisa, ama-cat meow adlala ophahleni lwezindlu, uhleko olude oludlula emafasiteleni noma ukhuphuka ezindleleni zamatshe.
Ifulethi, elisezingeni elilodwa nomgwaqo, linekamelo lokulala elikhulu elinombhede ophindwe kabili, kanye negumbi elincane elinemibhede emibili eyodwa. Igumbi lokuhlala-ikhishi libheke kuvulandi. Indlu yokugezela ifakwe eshaweni kanye ne-bidet.
Umshini wokuwasha izitsha onawo.
Ifulethi likweminye yemigwaqo eyehla esigcawini esikhulu, iChurch Square.
Kuwuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka e-Corso Italia lapho ungakhulula khona umthwalo wakho bese upaka.
Konke kungaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Azikho izitebhisi.
Isikwele sesonto sivame ukuba mnandi ehlobo, futhi nakuba ifulethi liqhele ngamamitha ambalwa, uma lingaphakathi, lithule ngokuphelele.
Lapho ngifika eTriora, ngihlala endlini eyodwa. Ngesikhathi sokuhlala kwakho, uzokwamukelwa umngane ongowokuzalwa endaweni ohlala e-Triora unyaka wonke. Njengawo wonke umuntu olapha, ungungoti omuhle wobuhle nezimfihlo zezwe lakubo, athanda ukukusho nokwabelana nanoma ubani ofuna!
Lapho ngifika eTriora, ngihlala endlini eyodwa. Ngesikhathi sokuhlala kwakho, uzokwamukelwa umngane ongowokuzalwa endaweni ohlala e-Triora unyaka wonke. Njengawo wonke umuntu olaph…
Hlola ezinye izinketho ezise- Triora namaphethelo